Faah Faahin:- Dagaal qasaare geystay oo maanta ka dhacay deegaanka Ceel-lahelay ee gobolka Mudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah Faahin:- Dagaal qasaare geystay oo maanta ka dhacay deegaanka Ceel-lahelay ee gobolka Mudug
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helaayaa dagaal maanta ka dhacay deegaanka Ceel-lahelay ee gobolka Mudug, kaas oo sida la sheegay u dhaxeeyay labo maleeshiyo beeleed oo xoolo kala dhacay.
Dagaalkaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sida la sheegay geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooday 1 qof, iyadoona 2 kale ay ku dhaawacantay.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo qadka teleefanka kula hadlay warbaahinta Bulshoweyn xarunteeda magaalada Muqdisho ayaa u sheegay in dagaalkaasi uu yimid kadib markii koox maleeyshiyo beeleed ah ay xoolo ka dhaceen kooxda kale, taas oo keentay in meesha la isku fara-saaro.
Dhinaca kale, dagaalkaan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeysay deegaanka Ceel-lahelay uu ka taagnaa xiisad u dhaxeeysay ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland oo ilaa iyo haatan isku hor-fadhiya.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan waan-waan ka dhex wado maleeshiyo beeleedkaasi maanta ku dagaalamay deegaanka Ceel-lahelay ee gobolka Mudug, iyadoona xaaladda deegaankaasi ay haatan tahay mid aad u kacsan.
Lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doono, iyadoona ay suurta-gal tahay in maleeyshiyo beeleedyadaasi ay markale halkaasi isku fara-saaraan.
Warkaan wixii kusoo kordha dib kala soco Insha Allaah